Mashandisiro anoita Apple Chakavanzika Dhizaini timu | IPhone nhau
Mashandiro anoita Apple Chakavanzika Dhizaini timu
Cristina Torres chinobata mufananidzo | | Apple zvigadzirwa
El Dhizaini ndechimwe chinhu icho Apple inotora kwete chete sekuratidzira kweayo zvigadzirwa mumusika asi sechimwe chinhu chinosiyanisa zita kubva kumakwikwi. Zvese zvigadzirwa zviri pamusika, uye zvimwe zvakawanda zvinochengeterwa zvakavanzika kana izvo zvisingazomboone mwenje, zvinoitwa pasi pemitemo yakavanzika muchivande mune inonzi Chakavanzika Dhizaini Studio. Kunyangwe zita rayo richiratidza neimwe nzira, isu tese tinoziva kuti iripo nekuti Apple yakazviratidza mukati mayo mune inopfuura imwechete yekushambadzira mushandirapamwe uye Johnny Yve ndiye anoimhanyisa. Ehe, kuziva kwekuvapo kwayo hazvireve kuti kuziva mashandiro ayo. Tiri kutaura nezvazvo nhasi.
Chokwadi ndechekuti iri rakavanzika dhizaini dhizaini iri munzvimbo iri pachena inofanirwa kuwanikwa kuburikidza nemvumo. Mariri, zvese zvakagadzirwa kuitira kuti zvachose hapana data rinobuda imomo. Chidzidzo ichi chiri muLL2 pasi pevhu uye chinozivikanwa nemadziro ayo marefu. Muchokwadi, kudzivirira chero kushamisika kwekutarisa kubva kunze, mahwindo ayo akanyatsogadzirwa kuti arege kubuda mukati nenzira iyi. Chokwadi ndechekuti nzvimbo yaro inobvumidza kuita nyore rakazvimirira basa uye panguva imwechete padyo kune vese avo vanoita zvinogoneka zvigadzirwa zvakagadzirwa neApple.
Asi izvi hazvisi zvega. Kwete chete zvakavanzika ndizvo zvinoita iyo Chakavanzika cheApple Studio Studio. Johny Yve ane hofisi chaiyo munzvimbo ino, kwaanobata timu yevanhu uye anotarisira kuvhura mapurojekiti matsva. Pano iwe unoshanda nema prototypes, uine mazano matsva uye kufunga kuti uzive zvinogona kuve zvinotevera. Asi musika unoongororwawo kuti uwane zvinofarirwa uye zvinodiwa nevatengi kuti vawane mhinduro. Uye pakati pehunyanzvi hwakawanda, hunyanzvi hunobva kupi?
Vamwe vanodaro zvizhinji zvezvinhu zvekugadzira zveApple zvakavanzika dhizaini dhizaini Inoiswa nefenicha yako uye zvese zvishongedzo zvinoishongedza. Muchokwadi, munzvimbo idzi hapana kana chinhu chisina kugadzirwa nemaoko. Zvese zvinhu zvakavakirwa mune yakaomesesa mhizha maitiro ayo anotakura, kunyangwe isingawanzoonekwa nguva dzose, dhizaini yeApple mukugadzirwa kwayo nekuti anga ari akafanana akagadzira iPod, iPhone kana Macbook vakazvitakura. Chii iwe chaunowana chinonyanya kufarira?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Mashandiro anoita Apple Chakavanzika Dhizaini timu
Hupenzi hwakadii…. yakazara, hautaure chero chinhu, senguva dzose ...
Ari pachokwadi kunyange asiri benzi asi kana achizadza nhau, zvakafanana nekutaura kuti iyo iPhone 7 ichave yakatetepa uye ichabuda munaGunyana kana isu tese tichiziva izvo kare
Pindura kuna Fromero23
Wona maDVD ako kubva kuTunes, iPhone kana iPad neMacX DVD Ripper Pro (Contest)
Apple inoderedza mutengo we iPhone 6s uye 6s Plus muIndia